Ny sarin'ny ZTE Quarz, ny Android Wear an'ny marika sinoa, dia voasivana | Vaovao momba ny gadget
Toa tamin'ity fiandohan'ny taona 2017 ity dia manandrana mamelombelona ny tsena iray toa toa nilaozan'ny orinasa samihafa izy ireo. Amin'ity indray mitoraka ity dia i ZTE no mikasa ny hanolotra smartwatch vaovao, amin'ity tranga ity dia nisafidy anarana malaza izy ireo, ZTE Quartz no voafidy, ary ny sary voalohany amin'ity smartwatch ity dia navoaka an-tserasera izay toa tsy misy teknolojia manavao be loatraFa raha ny fahombiazan'ny ZTE taloha dia azony antoka fa natao hampitsoka ny saintsika raha ny amin'ny vidiny no jerena.
Ny famantaranandron'ny orinasa sinoa dia tsy afaka nanjary niaraka tamin'ny kinova hafa momba ny rafitra fiasa izay tsy Android Wear 2.0, ny marika rehetra dia niandry ny maodelin'izy ireo tamin'ity fanavaozana ity izay apetrak'i Google eo am-pelatanan'izy ireo. Na izany aza, tsy fantatsika firy ny momba ireo fampiasa rehetra miaraka aminy, ankoatr'izay hanana efijery boribory tanteraka isika, famolavolana metaly somary tsara kokoa, ary ny vaovao tsy mahafinaritra izay tsy maintsy andefasantsika azy amin'ny alàlan'ny fitoeran-tsimatra, midika izany fa tsy maintsy ampidirintsika ny plastika isaky ny maniry hametraka azy amin'ny herin'ny bateria isika.
Tsy misy intsony ny miresaka momba ity famantaranandro ity, na ny NFC na ny GPS. Tsy fantatsika ihany koa ny fanoherany ny rano, na dia mihevitra aza isika fa tonga ao anaty sombin-javatra tokana izy io, ny zava-drehetra dia manondro fa azo alentika kely farafaharatsiny. Ny famantaranandro dia toa araka ny antenainao amin'ny vokatra ZTE, demokratika ny teknolojia sy ny vidiny mandritra ny fotoana maharitra, Mety ho ny safidy hafa lafatra amin'ny fifandraisana voalohany amin'ny vokatra toy izany. Tsy afaka nahita ny any aoriana izahay raha mahita raha manana sensor tahan'ny fo izy, na dia mihena aza ny fahitana azy, dia azontsika atao ihany koa ny manilika azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » SmartWatch » Navoaka ny sarin'ny ZTE Quarz, marika Android Wear an'ny marika sinoa
Ho tonga any Espana ny LG G6 amin'ny 13 aprily miaraka amin'ny vidiny 749 euro